China Indlu elevator (Uhlobo phakamisa) mveliso kunye nabenzi | Maoheng
Irayisi / Ingqolowa / Ingqolowa Isixhobo sokucoca umatshini-5XFZ-15XM
Izixhobo ziqhutywa yimoto, kwaye ibhakethi lenza isenzo sokuphakamisa okuqhubekayo.
I-hopper yenziwe ngezinto ezomeleleyo ze-PVC, kwaye ubomi benkonzo bude, kunye nenqanaba lomonakalo lokutya kunye nembewu inokuncitshiswa.
Ikakhulu esetyenziselwa imisebenzi yokunyusa nkqo eqhubekayo yomgubo, igranules kunye namaqhekeza amancinci. Isetyenziswa ngokubanzi ekuphuculeni izitokhwe ezikhulu zokugaya ukutya, izinto zokugaya umgubo kunye neendawo zokugcina ukutya okuziinkozo ezinobungakanani obahlukeneyo.
Olu hlobo lwesinyusi luthandwa ngakumbi kumabala emidlalo aseAfrika.
→ I-engile ezininzi:
Q: Baphi abasebenzi bakho be-R & D? Zithini iziqinisekiso?
A: Isebe lethu lobugcisa le-R & D linabantu aba-5 abaneminyaka eli-17 yamava kuyilo lwemveliso kwaye banakho ukuhlangabezana neemfuno zabathengi
Umbuzo: Ngaba iimveliso zakho zingazisa LOGO? kubathengi？
A: Ewe, umthengi wethu uzilungiselela iimveliso azifunayo ngokwesicelo somthengi kwaye eprinta iiLogo zazo.
Q: Ngawaphi amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ezinayo iimveliso zakho?
A: Sinezatifikethi selungelo elilodwa lomenzi wechiza ezi-5, kunye netekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi kwishishini elinye ifikelele phambili.
Q: Ngoobani abathengisi benkampani yakho?
A: Sisebenzisa izinto ezingavunyelwanga ezivela kubathengisi boqinisekiso lwasekhaya okanye bamazwe aphesheya ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso usemgangathweni
Q: Ngaba imveliso yakho inomyalelo wokuqala? Ukuba kunjalo, ngowuphi owona myalelo mncinci?
A: Ubungakanani bokuqala beemveliso ngokubanzi busetwa enye, kwaye ubungakanani bokuqala bemodeli ezizodwa ziiseti ezi-5.
I-A: ngokokusetyenziswa okungafaniyo kunye neziphumo, inokususa uthuli, izinto ezininzi ezahlukileyo, ezincinci ezahlukileyo, inkunkuma eyomileyo, iichips zentsimbi, amatye amancinci, ipolishi, ukutyabeka kunye nokupakisha.
Q: Ngaba inkampani yakho inohlobo lwayo?
A: Ewe, uMao Heng luphawu lwethu olwahlukileyo.
Q: Uphi umzi-mveliso wakho kwaye ndingatyelela njani?
A: Idilesi mveliso: CN, Hebei, shijiazhuang, South of Nanxicun Village, ETDZ:
Ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseShijiazhuang kufuneka malunga neeyure ezi-3 emva koko ndiqhubele kumzi-mveliso wam (1hour)
Ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseBeijing ukuya kwisikhululo sikaloliwe iShijiazhuang kufuneka malunga neeyure ezi-2, emva koko uqhubele kumzi-mveliso (imizuzu engama-30)
Ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseHongkong ukuya eShijiazhuang kwisikhululo seenqwelomoya samanye amazwe kufuneka malunga neeyure ezi-5, emva koko uqhubele kumzi mveliso (iyure e-1)
Egqithileyo Ingqolowa Sheller Machine (TK-20)
Okulandelayo: Irayisi / Ingqolowa / Ingqolowa Isixhobo sokucoca umatshini-5XFZ-15XM
Ibhakethi Ukuphakamisa Irabha Indlu
I-Chain yebhakethi Elevater
China Cement yebhakethi elevator
Oomatshini Bokwakha Ukutya kweBhakethi yebhakethi
Elevator China Eyona Ixabiso
Iebhakethi loyilo lweMigodi yeLifti
Nkqo Indlu ilifti
Umatshini we-Bean-de-stoner (5XQS-1500M)
Imbewu yeentaka / imbewu encinci yokwahlulahlula umatshini ...
Ucoceko olucocekileyo kunye neenkozo zembewu ngeCorn Granulat ...
Umatshini wokucoca iimbotyi zekofu